Lok मिनेट 'लोकी' हेर्नुहोस् यहाँ डिज्नी + मा नयाँ मार्वल शो पहिलो भन्दा पहिले
'लोकी' को Min मिनेट हेर्नुहोस् यहाँ नयाँ मार्वल शो डिज्नी + - BGR भन्दा पहिले
डिज्नी + मा प्रसारित गर्न तेस्रो मार्वल मूल श्रृंखला यस वर्षको स्ट्रिमिंग सेवामा सबैभन्दा प्रत्याशित MCU TV शो हो। टम हिडलस्टनको लोकी मार्भल सिनेमाल ब्रह्माण्डको शुरुको दिनदेखि नै यस्तो हिट थियो, त्यसैले मार्वलले यस पात्रलाई थप थप्दै गयो। थोर et एवेंजर्स कथाहरू यसले मार्भीललाई लोकीको खलनायक र वीर पक्ष दुबै अन्वेषण गर्न मद्दत पुर्‍यायो, नायकले आफ्नो कथाको अन्तमा पुग्दा एवेंजर्स: अनन्त युद्ध। धेरै व्यक्तिले सोचे कि लोकीले आफ्नो मृत्युलाई फेरि फेर्नुपर्ला, तर हामीले पाठ सिकेका छौं खेलको अन्त्य यो घटना थिएन। एमसीयूको मुख्य टाइमलाइनबाट लोकी राम्रोको लागि मरेका थिए जब उनी थानेसद्वारा मारिए। हामीले पनि सिक्यौं खेलको अन्त्य न्यु योर्कको लागि एभेंजर्सको भाग्ने उडानमा लोकीको एक फरक संस्करण भाग्यो। यो लोकी हो जसको आर्क भर्खरै सुरू भएको छ। यो चरित्र हो जुन हामीले पहिलोको अन्तमा अन्तिम पटक देख्यौं एवेंजर्स फिल्म हाम्रो ग्रह मिटाउन र यसलाई थानोसको नाममा जित्नको लागि तयार थियो। यो लोकी हो जो नयाँ मार्वल टिभी कार्यक्रमको नायक हुनेछ।
यो केवल मुख्य चरित्र मात्र होइन जसले बनाउँछ लोकी धेरै रोमाञ्चक। टिभी श्रृ series्खलाले एउटा मल्टिभर्से कहानी बताउनेछ जुन मितिमा भनिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मल्टिभर्से कहानी हो। यसले MCU मा पछ्याउन लागेका सबै चीजको लागि ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसकारण फ्यानहरू के हेर्न मर्दैछन् लोकी यो हो - र तपाइँले कार्यक्रमबाट थप कार्यहरू हेर्न बुधबार सम्म कुर्नु पर्दैन। पहिलो एपिसोडको पूर्ण minute मिनेट दृश्य लोकी पहिले नै अनलाइन उपलब्ध छ। तपाईंले पढ्न जारी राख्नु अघि, हामी तपाईंलाई चेतावनी दिन्छौं एपिसोड १ को लागी केहि बिघ्नकर्ताहरु तल फलो गर्नुहोस्.
मार्वलले मल्टिभर्सेको निर्माण गर्न सुरू गर्यो कमिला मानिस et अनौंठो डाक्टर चलचित्रहरू, र यो सबैको अन्त्य भयो खेलको अन्त्य, जहाँ हामीले वैकल्पिक टाइमलाइनको झलक देख्यौं। हामीले अन्य वास्तविकताहरूको बारेमा सिक्यौं जहाँ समान वर्णहरूको समान संस्करणहरू बस्छन्, र ती पात्रहरूले मुख्य टाइमलाइनसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्दछन्। यो मल्टिर्वर्स हो जसले मार्वललाई भविष्यका फिल्महरूमा कुनै पनि मृत चरित्रको पुनरुत्थान गर्न अनुमति दिन्छ, जसरी हामीले यसका लागि बहु पात्रहरू देख्यौं। खेलको अन्त्य। चलचित्रले हामीलाई थानोस, गामोरा र लोकीको नयाँ संस्करणहरू ल्यायो, ती पात्रहरू जो प्राथमिक वास्तविकतामा पहिले नै मरेका थिए। हामीले चलचित्रमा दुईवटा नेबुला पनि सामना गरेका छौं।
MCU चरण4यो भन्दा बढि जान्छ, यससँग स्पाइडर म्यान: पथ घर छैन र अर्को वर्ष डा। अजीब पागलपन को multiverse मा एक आपसमा बहुसrs्ख्यक कथाहरू हुनुपर्दछ।
तर यो यहाँ छ लोकी एक अत्यावश्यक भूमिका खेल्ने छ यी समय सीमानाको नियमहरू बुझाउँदै। मार्वलले कुनै गोप्य कुरा बताएको छैन कि समयको प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्ने अफिसियल प्राधिकरण टाइम भेरियन्स अथॉरिटी (TVA) द्वारा लोकीलाई गिरफ्तार गरिनेछ। टिभीएले दुर्व्यवहारको ईश्वरलाई भर्ना गर्ने र प्रभावकारी टाइमलाइनमा आदेश पुनर्स्थापित गर्नेछ, जुन लोकीले टेस्क्रैक्टमा चोरी गर्दा आफैंले अवरोध गरे। खेलको अन्त्य.
Minutes मिनेट लोकी क्लिप कि मनोरन्जनको लागि पहुँच यूट्यूबमा अपलोड गरियो लोकीको उम्कने कुरालाई भित्र पार्दछ खेलको अन्त्य। फिल्ममा लोकी न्यु योर्कबाट गायब भएदेखि यता हामीले देख्नै लागेका छौं यो दृश्य। हामीलाई थाहा थिएन कि उहाँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ वा के गर्दै थियो। यो त्यस्तो प्रकारको अन्त्य हो जुन त्यस समयमा कुनै फरक पर्दैन। तर हामीलाई थाहा थियो मार्भले यो सक्दो चाँडो यसलाई ठीक गर्नेछ लोकी टिभी कार्यक्रम धेरै महिना पछि घोषणा गरियो खेलको अन्त्य मुक्त गरिएको छ।
तपाईंले तल देख्नुहुनेछ, एपिसोड १ को शुरूमा हामी लोकीको गिरफ्तारीको हकदार हुनेछौं, र सबै चीज गौरवशाली हुनेछ। क्लिपले TVA कैदीहरूसँग व्यवहार गर्ने विभिन्न चरणहरू पनि देखाउँदछ, मोबियस (ओवेन विल्सन) र न्यायाधीश रेन्स्लेयर (गुगु मब्था-रा) लाई बाटोमा साथ प्रस्तुत गर्दै। अपेक्षित रूपमा, यी दृश्यहरूमध्ये धेरै हामीले देखेका थुप्रै ट्रेलरहरू र टिभी विज्ञापनहरूमा देखाइएको छ, त्यसैले यी ठूला आश्चर्यहरू छैनन्।
चार मिनेट शरारती लोकी मात्र पर्याप्त छ, तर तपाईंले यस क्लिपलाई बुधवार, जुन June, बिहानको प्रारम्भिक घण्टासम्म गर्नुपर्नेछ, जब लोकी डिस्ने + मा प्रसारण हुनेछ।
यो लेख पहिलो (अंग्रेजीमा) https://bgr.com/enter પ્રવેશ/loki-release-date-extended-clip-disney-plus-premiere-june-9-5930529/ मा देखा पर्‍यो
फ़ायरफक्स (((प्रोटोन) लाई संस्करण like 89 जस्तै बनाउनुहोस्